Itoobiya Oo Bilowday Olole Shan Maalmood Ah Oo Ay Garab Ugu Doonayso Biyo-xidheenka GERD - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaItoobiya Oo Bilowday Olole Shan Maalmood Ah Oo Ay Garab Ugu Doonayso Biyo-xidheenka GERD
Itoobiya Oo Bilowday Olole Shan Maalmood Ah Oo Ay Garab Ugu Doonayso Biyo-xidheenka GERD
Addis Ababa (JO) – Dawladda Itoobiya ayaa ku dhawaaqday olole ay dunida oo dhan ka samaynayso oo soconaya muddo shan maalmood ah kaas oo ay ku raadsanayso garab iyo taageero ay u hesho Biyo Xidheenka GERD oo khilaaf ka dhex abuuray Itoobiya iyo Masar.
Ololahan oo dhamaan doona Jimcaha, ayay Itoobiya ku sheegtay in ujeedadiisu tahay kor u qaadista wacyiga bulshada caalamka ee ku saabsan xaqa ay Itoobiya u leedahay inay dhisto biyo-xireenka iyo inay ka hortagto hadallada khiyaanada leh ee Masar ee ku saabsan GERD.
Itoobiya oo adeegsanaysa baraha bulshada gaar ahaan Twitterka ayay ku qarqin doonaa farriimo kala duwan oo ay ku sharraxayso biyo xidheenka Abay si ay bulshooyinka caalamku u arkaan in dalkani doonayo kaliya inuu ka faa’iidaysto biyihiisa.
Boqollaal kun oo Itoobiyaan ah oo daafaha dunida kala jooga ayaa la filayaa inay ka qayb-qaataan ololahan oo ay faafiyaan farriimaha dawladda.
Biyo Xidheenkan oo ay Itoobiya ka dhisayso Deegaanka Benishangul Gumuz oo uu wabiga Nile maro ayay dawladdu sheegtay in 74.5 boqolkiiba la dhamaystiray dhismihiisa, ayna hadda socoto hawsha buuxinta biyuhu.
SOMALILAND: Wasiir Ku Jeesjeesay Cabashada Saamiga Kuraasta Baarlamaanka Ee Reer Awdal